I-Liraglutide: ichiza elilungileyo lokunyanga isifo seswekile se-2 kunye nokukhuluphala
2. Ubume beLiraglutide
5. Umthamo kunye nemiyalelo yoLawulo lweLiraglutide
6. Zeziphi izibonelelo zeLiraglutide?
7. Kuya kufuneka ukhathalele ezi ziphumo zilandelayo / isilumkiso xa usebenzisa i-Liraglutide
8. Ukusebenzisana kweLiraglutide
9. Amava ezonyango
I-Liraglutide (204656-20-2) Ngaba amayeza athengiswa phantsi kwegama lohlobo oluthile kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi, ezisetyenziselwa iinjongo ezahlukeneyo zonyango. Awona magama e-Liraglutide aqhelekileyo kwimarike namhlanje yiVictoza kunye neSaxenda. Ukusetyenziswa kweLiraglutide kuxhomekeke kudidi oluthengayo, umzekelo, iVictoza isetyenziswa kakhulu ngokuzivocavoca ngokufanelekileyo nangokutya ukukhulisa ulawulo lweeswekile kubantu abadala kwaye uthayiphe i-2 yesifo sikashukela kubantwana abaneminyaka elishumi ubuncinane. Ukongeza, iVictoza ikwabonakalisile ukuba ibalulekile ekunciphiseni umngcipheko weengxaki zentliziyo ezinje ngokubetha okanye ukubetha kwentliziyo kubantu abadala abanezifo zentliziyo kunye nohlobo lwesifo seswekile i-2.
Kwelinye icala, Saxenda, nayo enye uphawu lweLiraglutide, isetyenziswa ngokutya okufanelekileyo kunye nokuzivocavoca ukunceda abasebenzisi ukunciphisa umzimba xa bekhathazwa ziimeko ezahlukeneyo zempilo. Ngaphandle kokuba ligama lophawu lwe-Liraglutide, i-Saxenda ayisetyenziselwa ukunyanga uhlobo lwe-1 okanye uhlobo lwesifo seswekile, kwaye ayisiyiyo inkanuko yokutya okanye into yokunciphisa umzimba. Ugqirha wakho unokucebisa I-Liraglutide iyasebenzisa nezinye izizathu ezingafakwanga kwesi sikhokelo. Nangona kunjalo, kucetyiswa ukuba uhlala ufumana idosi efanelekileyo ye-Liraglutide kugqirha wakho ukuze ufumane iziphumo ezingcono.
I-Liraglutide iyathengiswa kwiivenkile ezahlukeneyo ze-Intanethi kunye neekhemesti zomzimba, kodwa kuya kufuneka uhlale unonophele malunga nomthombo wakho. Soloko usenza uphando olululo ukuze uqiniseke ukuba ufumana ichiza lakho kumthengisi onyanisekileyo nonamava. Umgangatho wamayeza owathathayo anefuthe kwiziphumo oya kuzifumana ekupheleni komjikelo wethamo. Ixabiso leLiraglutide lingahluka ukusuka kumthombo ukuya komnye kodwa qiniseka ukuba ufumana owona mgangatho uphambili. Ukuba awuqinisekanga ngalo mthombo, nxibelelana namayeza akho.
Ngokwemichiza, Ubume beLiraglutide yenziwe ngepeptide ye-glucagon esebenza ixesha elide enesithintelo esilawulwa ngokufihlakeleyo kunye nomsebenzi we-antihyperglycemic. Isenzo esinexesha elide lesiyobisi sisiphumo se-acid enamafutha, kunye nokufakwa kwe-asidi ye-Palmitic kwi-GLP-1, ebopha ngokulula nge-albhamuin. Ukubopha i-albhamuin kudlala indima ebalulekileyo ekukhuseleni i-Liraglutide ekuthotywa kwangoko emva kokuba uthathile kwiidosi zakho, kwaye ngenxa yoko, kukhokelela ekukhutshweni okungaguqukiyo kunye nokucothayo kwe-GLP-1. Oku kuqinisekisa ukuba ufumana iziphumo ezinqwenelekayo ngexesha elifutshane kakhulu.
I-FDA ivume zombini iVictoza kunye ne-Saxenda kunyango lweemeko ezahlukeneyo zonyango eMelika. Njengoko kuchaziwe ngaphambili, uVictoza uvunyelwe unyango lweengxaki zentliziyo kunye nodidi lwesifo seswekile i-2. Kuyaziwa ngokunciphisa iimpawu zesisu ezifana nokugabha, isicaphucaphu, kunye nesisu. I-Saxenda yavunywa yi-FDA ukunceda kunyango lokutyeba kakhulu kunye nolawulo lomzimba. I-Liraglutide kufuneka ithathwe xa ufuna ukunciphisa iingxaki zentliziyo ezibangelwa zizifo zentliziyo okanye uhlobo lwe-2 yeswekile ye-mellitus. Kwakhona, ukuba ufuna ukulawula ubunzima bomzimba wakho obangelwa luhlobo lwe-2 yeswekile mellitus, ukutyeba kakhulu kweLiraglutide kuya kuba sisiyobisi esihle kuwe. Ukutyeba kakhulu kweLiraglutide ikwancede abasebenzisi abaninzi ukulawula ubunzima babo. Nokuba uhlangabezana neempawu ezinokunyangwa nge-Liraglutide powder, musa ukuthatha eli chiza ngaphandle kokucebisana nengcali yezempilo. Nangona kunjalo, khumbula ukuba ugqirha wakho unokukunika eli chiza ukuze ulincedise kunyango lwayo nayiphi na imeko yezonyango engadwelwanga kweli nqaku.
Kwiimeko ezininzi, i-Liraglutide isebenza ngokuxhomekeke kwinto oyifunayo ukuyifikelela esiphelweni somjikelo wethamo. Umzekelo, indlela ye-Liraglutide yesenzo sabantu abathatha i-liraglutide idosi yokunciphisa umzimba yahlukile kubasebenzisi abayithatha beyenzela unyango lwe-2 isifo sikashukela. Iimpawu ezimbini zeLiraglutide zamagama UVictoza kunye noSaxenda sebenza ngokwahlukileyo bakuba bangene kwinkqubo yakho yomzimba.
Umzekelo, ukukhuluphala kwe-Liraglutide (Saxenda) kusebenza ngokunyanzela ukuveliswa kwehomoni yokutya (glucagon-like-peptide okanye i-GLP-1) emzimbeni wakho, elawula indlala yakho. Umzuzu wokuveliswa kwe-GLP-1 uyehla, ukuthanda kwakho ukutya kuya kuhla kwaye kugqibe ukutya iikhalori ezimbalwa, kwaye ekuhambeni kwexesha, ulahlekelwe ubunzima bomzimba wakho. Iikhalori zinoxanduva lokunyusa ubunzima bomzimba wakho, kwaye ukuba unako ukuzilawula, kuya kuba lula kuwe ukuphalaza iipawundi.
Kwelinye icala, uVictoza usebenza ngeendlela ezintathu ezahlukeneyo zokuhambisa iziphumo ezathenjiswa ngumvelisi weziyobisi. Okokuqala, iVictoza isebenza ngokucotha ukutya ishiya isisu sakho, elawula amanqanaba eswekile emzimbeni wakho. Nangona kusetyenziswa umatshini ofanayo, iyeza likhusela nesibindi sakho ekuveliseni iswekile eninzi. Okokugqibela, i-Liraglutide, eyeyona nto iphambili kwiVictoza, iphinda ikhuthaze i-pancreas yakho ukuba ivelise i-insulin ngakumbi xa amanqanaba eswekile yegazi ephezulu. Isiyobisi siphucula yonke le misebenzi ngokunyusa ukusebenza kweeseli ze-beta. Iiseli zinceda ukulawula iswekile yegazi ngokukhupha i-insulin, ebeka amanqanaba eswekile kwinkqubo yomzimba wakho. Ukukhuthaza ukuveliswa kwe-insulin emzimbeni wakho sesona sizathu siphambili sokuba iVictoza isetyenziswe ikakhulu kunyango uhlobo lwe-2 sikashukela mellitus.
I-Liraglutide iyasebenzisa kwahluka ukusuka komnye umsebenzisi ukuya komnye kuxhomekeke kwimeko yempilo ekunyangiweyo. I-dosage yeyeza kufuneka isethwe ngugqirha kuxhomekeke kwimeko ekunyangwa kuyo. Abantwana abangaphantsi kweminyaka elishumi abacebiswanga ukuba bathathe eli chiza, kuba oko kunokubabeka kwiziphumo ezibi kakhulu. Imizimba yabantu nayo yahlukile, yiyo loo nto kusoloko kucetyiswa ukuba uye kuxilongwa ngaphambi kokuba uqale uthathe naliphi na ichiza. Nangona i-Liraglutide iza nemiyalelo yethamo iphakanyiswa ngumenzi, ngamanye amaxesha isenokungasebenzi kuwe. Ugqirha ngoyena mntu ulungileyo ukukunika iyeza elilungileyo le-Liraglutide emva kokuvavanya imeko yakho yempilo.
I-Liraglutide sisiyobisi esinokuchaphazeleka ekufuneka siphathwe engalweni yakho ephezulu, esiswini, okanye ethangeni. Akukho xesha libekiweyo lokuba uthathe idosi yakho ye-Liraglutide, kodwa ungayithatha okanye ungayidli. Unokuhlala ujikelezisa iisayithi ze-liraglutide zokujova ukunciphisa iziphumo okanye iintlungu onokuthi uzive kuloo ndawo. Ixesha lokulawulwa kwedosi lingatshintshwa kakuhle ngaphandle kokuhlengahlengisa i-dosage. Kucetyiswa ukuba usoloko uhlola yonke Inaliti yeLiraglutide ngumbono; Kuya kufuneka uthathe inaliti yakho kuphela xa isisombululo singenamabala, sicacile, kwaye singenawo amasuntswana abonakalayo. Kwimeko apho isisombululo sakho sikhula nayiphi na imibala engaqhelekanga, ungayithathi ngaphandle kokubonisana nodokotela wakho.
I-dosi ye-Liraglutide powder iya kuxhomekeka kunyamezelo lomzimba wakho, ubudala kunye nemeko yempilo ekunyangwa ngayo.
Uhlobo lwesifo seswekile i-2
Okokuqala I-Liraglutide powder (204656-20-2) idosi kubantu abadala yi-0.6mg, ekufuneka ithathwe kanye ngosuku ngeveki enye. Emva kweveki enye, umthamo unokuhlengahlengiswa kwi-1.2mg subcutaneally kanye ngemini, kwaye ukuba awufezekisi ulawulo lwesi sifo, ugqirha wakho unokunyusa umthamo ukuya kwi-1.8mg ngosuku. Idosi yesondlo ye-Liraglutide ifanele ibe phakathi kwe-1.2 kunye ne-1.8 mg ngemini. Nangona kunjalo, eyona dosi iphezulu yi-1.8mg ngosuku.
Idosi ye-0.6mg yokuqala yedosi ngosuku yenzelwe ukunciphisa iimpawu zesisu ezibangelwa kukuqalisa kwonyango kwaye ayinakuba yanele kulawulo lwe-glycemic. Nangona kunjalo, i-Liraglutide ayiyiyo indawo ye-insulin kwaye abaguli abanesifo se-1 seswekile mellitus okanye iswekile ketoacidosis akufuneki bayithathe. Xa uqala olu nyango, cinga ukunciphisa i-insulin secretagogue ukunciphisa umngcipheko we-hypoglycemia.
Ukucuthwa komngcipheko weentliziyo
Umthamo wokuqala we-Liraglutide kubantu abadala abaneengxaki zentliziyo kunye ne-0.6mg ngosuku kwaye kufuneka uthathwe kwiveki yokuqala. Umthamo kufuneka unyuswe uye kwi-1.2mg ngosuku kwiveki elandelayo, kwaye ukuba awufezekisi ulawulo lwe-glycemic, ugqirha wakho kuya kufuneka anyuse umthamo ukuya kwi-1.8mg ngosuku. Nangona kunjalo, ngexesha Liraglutide powder Idosi inyuswe ukuya kwelona nqanaba liphezulu, uya kuba usifumene iziphumo ozifunayo. Umthamo wolondolozo kufuneka ube phakathi kwe-1.2mg kunye ne-1.8mg ngemini, ngelixa elona thuba liphezulu labantu abadala yi-1.8mg ngosuku.
I-Liraglutide idosi yabantu abadala yokunciphisa umzimba okanye ukutyeba kakhulu
The ukunciphisa umzimba kwi-liraglutide ukunyuka komthamo kufuneka kuthotyelwe, ukunciphisa amathuba okufumana iimpawu zesisu. Ukulungiswa kwethamo kunokulibaziseka kwiveki eyongezelelweyo ukufumana iziphumo ezingcono. Nangona kunjalo, ugqirha wakho kufuneka akukhokele kule nkqubo. Umthamo wokuqala apha yi-0.6, ekufuneka ithatyathwe ngokuthe gca ngemini. Kwiveki yesibini, idosi inokunyuswa iye kwi-1.2mg ngemini; kwiveki yesithathu, umthamo unokuphakanyiswa ngakumbi kwi-1.8 ngemini. Kwiveki yesine, idosi kufuneka ikonyuselwe kwi-2.4mg kwiveki yesihlanu ukuya kwi-3mg kube kanye ngemini. Nangona kunjalo, ugqirha wakho uya kukukhokela ukuba ungayiphucula njani na idosi.
Idosi yesondlo apha yi-3mg kanye ngemini, kodwa ukuba umzimba wakho awunakho ukuyinyamezela, ugqirha unokukucebisa ukuba uyeke idosi. Ulawulo lwesisindo esingapheliyo usebenzisa eli chiza lufunyenwe kuphela ngeedosi eziphezulu. Ukukhuluphala, uphawu lweSaxenda Liraglutide lubonakalise ukuba lubalulekile kulawulo lomzimba, kwaye ichiza alisetyenziselwa ukunyanga uhlobo lwesifo seswekile i-2. Nangona kunjalo, iVictoza iyaziwa ngokunyanga uhlobo lwe-2 yesifo sikashukela kunye neengxaki zentliziyo.
Idosi ye-Liraglutide inaliti kufuneka ithathwe kuphela ngabantwana abaneminyaka yobudala elishumi nangaphezulu. Nawuphi na umntwana ongaphantsi koko kufuneka anganikwa eli chiza nokuba ngaba zibonisa iimpawu ezinokunyangwa ngale peptide. Unyango lwe-liraglutide yabantwana luxhomekeke kwimeko yezempilo ekunyangwa ngayo. Iidosi eziphakanyisiweyo zezi zilandelayo;
Idosi yonyango lomntwana onesifo seswekile i-2
Umthamo wokuqala we-inaliti we-Liraglutide ye-sindano yi-0.6mg, ekufuneka ithathwe kanye ngosuku kangangeveki enye. Emva koko, idosi inokunyuswa iye kwi-1.2mg ngemini, kwaye ukuba ulawulo lwe-glycemic alukafunyanwa, amayeza anokunyusa idosi ukuya kwi-1.8 gm kwiveki elandelayo. Elona nani liphezulu labantwana kwisifo seswekile esisibini yi-1.8mg ngemini, ngelixa idosi yesondlo iqala kwi-0.6mg ukuya kwi-1.8mg ngemini.
I-liraglutide inokwabelwa abantwana ukuba bancede kunyango lweemeko ezahlukeneyo zempilo ezinje ngeengxaki zempundu kunye nesibindi. Nangona kunjalo, xa unyanga ezi meko zimbini, kuya kufuneka uthathe i-Liglutide ngononophelo kuba oko kunokukhokelela kwiziphumo ezibi kakhulu xa zisenziwa ngokweqile. Akukho luhlengahlengiso lwethamo luyacetyiswa xa uthatha i-liraglutide peptide yesibindi okanye imiba yezintso. Xa uthatha umthamo we-liraglutide, ukunciphisa naluphi na ukungena kwe-insulin ukunciphisa umngcipheko we-hypoglycemia.
Yintoni eyenzekayo xa ndidlula ngaphezulu?
Ukusela ngokweqile naliphi na ichiza ayisiyonto ilungileyo kwaye akufuneki ukuba ikhuthazwe nokuba uthatha a I-Liraglutide idosi yokunciphisa umzimba okanye unyango lwayo nayiphi na imeko yezempilo. Uyacetyiswa ukuba usoloko unamathela kwimiyalelo yedosi oyinikwe ngugqirha. Ukusela kakhulu kunokukhokelela kwiziphumo ezibi kakhulu, ezinokuthi zibe mandundu imeko yezempilo yakho okanye zikhokelele kwezinye iingxaki zempilo. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha, ukusela ngokweqile kunokuba sisiphumo sengozi okanye indlela umzimba wakho ojonga ngayo kwichiza. Iziphumo ebezingalindelekanga ezixhaphakileyo zokusela ngokweqile zibandakanya ukubetha kakhulu kunye ukugabha. Xa uqaphela ukuba uthathe umthamo ongaphezulu kunokucetyiswa, funa unyango ngokukhawuleza. Unokufikelela nakugqirha wakho ukuba akuncede.
Kule minyaka idlulileyo, i-Liraglutide ibonakalise ukuhambisa izibonelelo ezahlukeneyo, ngakumbi kwilizwe lezonyango. Nangona kunjalo, unokufumana kuphela ubuninzi bokugqibela Izibonelelo ze-liraglutide, ukuba unamathela kwimiyalelo yethamo kunye nokutya okufanelekileyo okanye umthambo njengoko ucetyiswe ngugqirha. Nazi ezinye zeenzuzo ezaziwa kakhulu zeLiraglutide.
Uphuculo Uhlobo lwesifo seswekile se-2
Igama le-brand ye-Liraglutide iVictoza isetyenzisiwe kwaye yamkelwa yi-FDA kunyango lwesifo seswekile i-2. Eli chiza liyanceda ukulawula iswekile yegazi emzimbeni wakho. Xa amanqanaba eswekile ephezulu emzimbeni wakho, i-liraglutide ivuselela i-pancreas yakho ukuba ivelise i-enzyme enkulu ye-insulin enceda ekupheliseni iglucose yegazi.
Uncedo ekulweni nokutyeba kakhulu kunye nobunzima bomzimba
E-United States yaseMelika, i-FDA ivume iLiraglutide kunyango lokutyeba kakhulu emva kokuba ibonakalisile ukuba iyasebenza ekucinezeleni umdla wokutya kunye nokutya iikhalori ezanceda kulawulo lomzimba. Ngokomyinge, abasetyhini bafumana ubunzima obukhulu bokunciphisa umzimba xa bethatha i-liraglutide yehle ubunzima bomzimba kunamadoda. Nangona kunjalo, oko akuthethi ukuba amadoda awazukuxhamla kwesi siyobisi. Ngamava angcono okulahleka kwesisindo ngeli liyeza, ukutya okufanelekileyo kunye nokuzivocavoca kufuneka kuhanjwe kunye nomthamo.
Ikhusela inkqubo yeVascular
I-liraglutide ibonakalisile ukuba ibalulekile ekukhuseleni izihlunu zentliziyo yakho kunye nokunciphisa umngcipheko wezifo zentliziyo. Izifundo zonyango zikwabonisa ukuba ukuthatha i-liraglutide, ukuphuculwa kwezifo zentliziyo ezibangelwa luhlobo lwesifo seswekile se2 kunye nokukhuluphala. Eli chiza likwanceda ekulinganiseni uxinzelelo lwegazi lakho, elincedayo ekunyuseni impilo yakho yemithambo.
Eli chiza kuthiwa likwanefuthe elihle ekuphuculeni impilo yengqondo yakho, ukunceda kulawulo loxinzelelo, kwaye linokusebenza njengesixhobo esichasene ne-oxidant kunye nokuchasana nokuvuvukala. Kwesinye isifundo sezonyango, i-liraglutide ibonise ukuba inokunceda abantu abanotywala. Nangona kunjalo i-liraglutide overdose inokuthi ikubhence kwiingxaki zempilo kwaye zonakalise zonke izibonelelo ezilindelekileyo.
Phantse lonke ichiza, xa lisetyenziswe gwenxa okanye lithe gqolo kunokubhengeza kwiziphumo ezibi kakhulu, kwaye i-liraglutide ayiqhelekanga. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha iziphumo ebezingalindelekanga zinokubakho ngenxa yendlela umzimba wakho ophendula ngayo kwi-liraglutide yokulahleka kwesisindo. Abanye izilumkiso ze-liraglutide ziqhelekile kwaye zinyamalale lihamba nexesha, kodwa kwimeko apho ezi ziphumo zilandelayo zinganyamalali kunye nexesha okanye ziba mandundu, funa unyango;
Impumlo ebalekayo, ukukhwehlela okanye ukuntywila
Ukutsha okanye ubunzima xa uchama
Iindawo ze-Liraglutide zokufaka inaliti rednessor rashes
Ukuqunjelwa kunye ukubetha kwentliziyo
Kukho izilumkiso ze-liraglutide eziqatha ezifuna ukhathalelo lwezonyango kwangoko nje ukuba uqalise ukuhlangana nazo, kwaye zibandakanya;
Ulusu okanye amehlo
Ukuba uqala ukucinga ngokubulala, ukuzenzakalisa wena okanye abanye abantu
Isicaphucaphu, umqala odumbileyo, ulwimi, ubuso, amehlo okanye umlomo.
Kunzima ukuginya okanye ukuphefumla.
Ezi zinto zinzulu Iziphumo ebezingalindelekanga zeLiraglutide, uyacetyiswa ukuba uyeke ukuthatha imithamo ngokukhawuleza njengoko ufuna uncedo lwezonyango.
Ukudibana kweziyobisi kunokuchaphazela indlela oza kusebenza ngayo amayeza akho okanye kukubeke emngciphekweni omkhulu wokufumana iziphumo ebezingalindelekanga. Ke ngoko, ngaphambi kokuba uqalise ukuthatha i-Liraglutide idosi, kubalulekile ukuba wazise ugqirha wakho ngayo nayiphi na enye imeko yezempilo oyiphilayo. Amanye amachiza awanakusebenza kunye, kwaye kufanelekile ukuba ugqirha wakho awazi malunga nalo naliphi na amanye amayeza onokuwathatha. Ukuba kwicala elikhuselekileyo, ungaqali, utshintshe umthamo okanye uyeke ukuthatha naliphi na iyeza ngaphandle kokudibana neengcali zonyango.
Uyacetyiswa ukuba ungathathi naliphi na iyeza ngalo naliphi na amanye amayeza aqukethe i-Liraglutide njengoko oko kunokukhokelela ekuzishenxiseni nasekukubhengeni kwiziphumo ezibi kakhulu. Kuxhomekeke kwimeko yakho yezempilo, ugqirha wakho uya kukubonelela ngokuchanekileyo Ukusebenzisana kweLiraglutide ukuphucula iziphumo. Zininzi iziyobisi onokuzithatha kunye neLiraglutide ezifana neacetohexamide, albuterol, cinoxacin kunye ne-danazol, phakathi kwabanye abaninzi.
Ngoku ka uphononongo lwe-liraglutide kumaqonga awahlukeneyo e-Intanethi, abasebenzisi abaninzi banelisekile ziziphumo kunye nezibonelelo abazonwabileyo ngelixa okanye emva kokuthatha amachiza. Izifundo zonyango zikwabonisa ukuba ichiza libe luncedo njani kunyango lweemeko ezahlukeneyo zonyango ezinje ngokutyeba kakhulu, uhlobo lwe-2 yeswekile ye-mellitus, iingxaki ze-renal kunye nokukhusela izifo zentliziyo ezibangelwa ziimeko ezahlukeneyo zempilo. Unxibelelwano lwe-liraglutide lukwangqinele ukuba lunamandla kunyango lwesifo seswekile i-2 kubantwana abaneminyaka eli-10 ubudala.
Nangona kunjalo, abanye abasebenzisi baye banamava amabi ngeli chiza, kodwa loo nto inokubangelwa yi-Liraglutide overdose okanye ukunyamezelana komzimba. Iindaba ezimnandi kukuba imiphumo emibi ye-liraglutide inokubuyiselwa umva ukuba unxibelelana nodokotela wakho ngexesha elifanelekileyo. Eyona ndlela ingcono yokuphepha ukujongana neziphumo ebezingalindelekanga ezibi ngelixa uthatha eli chiza kukuya kuvavanyo lwezonyango ngaphambi kokuba uqale umthamo wakho kwaye uvumele imedical iseti elungileyo. Kucetyiswa ukuba ulandele imiyalelo yethamo kwaye wazise ugqirha wakho ngalo naliphi na elinye ichiza elinokuba ulithatha.
Eli chiza lingqine ukuba libalulekile kwilizwe lezonyango ngakumbi kunyango lokutyeba kakhulu, uhlobo lwesifo seswekile se-2 kunye neengxaki zentliziyo, phakathi kwabanye. I-Liraglutide powder (204656-20-2) iyathengiswa kwiivenkile ezahlukeneyo ze-Intanethi, kodwa uya kuyifumana ngamagama ohlobo oluthile afana noSaxenda kunye neVictoza. Nangona kunjalo, qiniseka ukuba uyakuqonda ukuba yintoni uphawu ngalunye lusetyenziselwa ngaphambi kokwenza iodolo yakho. Njengoko kukhankanyiwe apha ngasentla, igama legama liraglutide nganye lisetyenziselwa injongo ethile. I-Saxenda ivunyiwe ukunciphisa umzimba kunye nokunyanga ukukhuluphala ngelixa i-Victoza isetyenziswa ngohlobo lwe-2 unyango lweswekile kunye nezifo zentliziyo ezibangelwa ngamanqanaba aphezulu eswekile yegazi. Nangona kunjalo, landela imiyalelo yethamo ukuthintela ukujongana neziphumo zeLiraglutide.
Kuyacetyiswa ukuba wenze uphando olufanelekileyo malunga neyakho I-liraglutide ithenge umthombo ngaphambi kokwenza ukuthenga kwakho. Namhlanje baninzi abathengisi be-peptide kwimarike, bekwenza kube nzima kuwe ukwazi ukuba ungalifumana phi iyeza elisemgangathweni eliza kukuqinisekisa ngeziphumo ezihle. Jonga uphononongo lwe-liraglutide kwiwebhusayithi yomthengisi ukufumana umbono ogcweleyo malunga neemveliso kunye nendlela umthengisi asebenza ngayo. Ukukhetha umthengisi onamava kakhulu kunye nodume ngokuthenga i-liraglutide uya kukuqinisekisa ngeenkonzo ezisemgangathweni kunye neemveliso zonyango ezisemgangathweni. Iindleko ze-Liraglutide ziyahluka ukusuka kubathengisi ukuya kwenye.
Awunakhathazeka malunga nantoni na xa uthatha i-Liraglutide kuba ilichiza elisemthethweni kunye neziphumo ezingcono, ukubandakanya amayeza akho kumjikelezo wethamo lonke.
Kaakeh, Y., Kanjee, S., Boone, K., & Sutton, J. (2012). I-Liraglutide ‐ icaphukisa ukwenzakala kwezinso. Amachiza amayeza: IJenali yeHypacology yoLuntu kunye nonyango lweziyobisi, 32(1), e7-e11.
UMarso, SP, Daniels, GH, brown-Frandsen, K., Kristensen, P., Mann, JF, Nauck, MA,… kunye neSteinberg, WM (2016). I-Liraglutide kunye neziphumo zeentliziyo kunye nohlobo lwe-2 yeswekile. I-New England Journal of Medicine, 375(4), 311-322.
Lind, M., Hirsch, IB, Tuomilehto, J., Dahlqvist, S., Ahrén, B., Torffvit, O.,… & Sjöberg, S. (2015). I-Liraglutide ebantwini inyangwa uhlobo lwesifo seswekile i-2 ngesitofu se-insulin semihla ngemihla: uvavanyo lweklinikhi olungalawulekiyo (ulingo lwe-MDI Liraglutide). Bmj, 351, h5364.
UDavies, MJ, Bergenstal, R., Bode, B., Kushner, RF, Lewin, A., Skjøth, TV,… & DeFronzo, RA (2015). Ukusebenza kwe-liraglutide yokulahleka kwesisindo phakathi kwabaguli abanesifo seswekile se-2: isifo seScALE seswekile yovavanyo lweklinikhi. Jama, 314(7), 687-699.